PCR/RT-PCR uchungechunge Suppliers kanye Factory |China PCR/RT-PCR uchungechunge Abakhiqizi
I-RT-PCR Easyᵀᴹ I(Isinyathelo esisodwa)
◮Ikhithi yesinyathelo esisodwa yenza ukuba ukuloba okuhlanekezelwe kanye ne-PCR kwenziwe ngeshubhu efanayo.Idinga kuphela ukwengeza isifanekiso se-RNA, iziqalisi ezithile ze-PCR kanye ne-RNase-Free ddH2O.
◮Ukuhlaziywa kobuningi besikhathi sangempela se-RNA kungenziwa ngokushesha nakancane.
◮Ikhithi isebenzisa i-Foregene reverse transcription reagent eyingqayizivele kanye ne-Foregene HotStar Taq DNA Polymerase ehlanganiswe nesistimu yokusabela ehlukile ukuze kuthuthukiswe ngempumelelo ukukhulisa amandla kanye nokucaciswa kokusabela.
◮Isistimu yokusabela ethuthukisiwe yenza ukusabela kube nokuzwela okuphezulu kokutholwa, ukuzinza okuqinile kokushisa, nokubekezelelana okungcono.
I-RT-PCR Easyᵀᴹ II(Izinyathelo ezimbili)
◮ Isistimu yokusabela ethuthukisiwe yenza ukusabela kube nokuzwela okuphezulu kokutholwa, ukuzinza okuqinile kokushisa, nokubekezelelana okungcono.
◮I-Sila—2× PCR Mix ukuze unciphise iphutha lokuhlola nesikhathi sokusebenza
◮I-Specific-optimized buffer kanye ne-hot-start Taq enzyme ingavimbela ukukhulisa okungaqondile kanye nokwakheka kwe-primer dimer
◮Ukuzwela okuphezulu-kungathola amakhophi aphansi esifanekiso
◮Ukuguquguquka okuhle—kuhambisana nezisetshenziswa eziningi ze-PCR zesikhathi sangempela
Isikhathi Sangempela PCR Easyᵀᴹ-SYBR Green I kit
I-Simple—2X PCR Mix ukuze kwehliswe iphutha lokuhlola nesikhathi sokusebenza
I-Specific-optimized buffer kanye ne-hot-start Taq enzyme ingavimbela ukukhulisa okungaqondile kanye nokwakheka kwe-primer dimer
Ukuzwela okuphezulu-kungathola amakhophi aphansi esifanekiso
Ukuguquguquka okuhle—kuhambisana nezisetshenziswa eziningi ze-PCR zesikhathi sangempela
I-PCR Heroᵀᴹ (With Dye)
◮Ukuthembeka okuphezulu: izikhathi ezi-6 kune-enzyme ye-Taq evamile;
◮Isivinini sokukhulisa ngokushesha
◮Ukuvumelana nezimo kwesifanekiso
◮Ukusebenza kahle kwe-amplification ephezulu
◮Ukubekezelelana kwemvelo kunamandla: kubekwe ku-37 ° C ngesonto, kugcina umsebenzi ongaphezu kuka-90%;
◮Inomsebenzi we-DNA polymerase ongu-5'→3' kanye nomsebenzi we-exonuclease ongu-5'→3', ngaphandle komsebenzi we-exonuclease ongu-3'→5'.
◮Isistimu yokwenza kahle ye-PCR yenza i-2×QuickEasyTMI-Real PCR Mix-Taqman ihambisana kakhulu.
◮I-Hot-start Foregene HS Taq Polymerase inekhono eliphezulu lokukhulisa i-amplification, ukuzwela kokukhulisa ukuphakama, kanye nokucaciswa kokukhulisa okuphezulu okuphezulu.
◮2 × QuickEasyTMI-Real PCR Mix -Taqman isebenzisa isistimu eyingqayizivele elungiselelwe i-Foregene ukuze kuthuthukiswe ukuzwela kanye nokucaciswa kokutholwa kophenyo okulandelanayo, okungase kusetshenziselwe ukunquma i-genotyping nokukopisha ukuhluka kwenombolo nokuthola imiphumela enembayo.
◮Lo mkhiqizo uza nodayi wereferensi wangaphakathi we-ROX, ongasetshenziswa ukuqeda ingemuva lesignali kanye nephutha lesiginali phakathi kwemithombo, okulula ukuthi amakhasimende ayisebenzise ezinhlotsheni ezahlukene zamathuluzi e-PCR amaningi.
◮Ukwethembeka okuphezulu: 6izikhathi ezejwayelekile ze-Taq enzyme;
◮Ngokushesha aisivinini sokukhuliswa:isivinini sokukhulisa i-5-10sec/kb, okuyizikhathi ezingu-6-12 kune-enzyme ye-Taq evamile;
◮Ukuvumelana nezimo kwesifanekiso: ingakwazi ukukhulisa kahle izifanekiso ze-DNA eziyinkimbinkimbi ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-GC futhi okunzima ukukukhulisa;
◮PhezuluUkusebenza kahle kokukhulisa: inani lemijikelezo yokukhulisa i-amplification liphansi kunalelo le-enzyme ye-Taq evamile;
◮Skakhudlwana Ukubekezelelana kwemvelo: ibekwe ku-37°C isonto lonke, igcina ngaphezu kwalokho90%umsebenzi;
I-PCR Easyᵀᴹ (enedayi)
Iqhawe le-2× PCRTM I-Mix system inokubekezelela okuphezulu kuma-PCR inhibitors kunesistimu evamile ye-PCR Mix, futhi ingabhekana kalula nokukhulisa i-PCR yezifanekiso eziyinkimbinkimbi ezihlukahlukene.Isistimu yokusabela eyingqayizivele kanye nokusebenza kahle okuphezulu kwe-Taq Hero kwenza ukusabela kwe-PCR kube nokusebenza kahle kokukhulisa ukuphakama, ukucaciswa nokuzwela.
Isistimu yokusabela eyingqayizivele kanye nokusebenza kahle okuphezulu kwe-Taq DNA Polymerase kwenza ukusabela kwe-PCR kube nokusebenza kahle kokukhulisa ukuphakama, ukucacisa nokuzwela.